Cafis loo fidiyay ciidamadii Ahlu Sunna ee Dhuusa Mareeb kula dagaalamay ciidanka Dowladda | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Cafis loo fidiyay ciidamadii Ahlu Sunna ee Dhuusa Mareeb kula dagaalamay ciidanka...
Cafis loo fidiyay ciidamadii Ahlu Sunna ee Dhuusa Mareeb kula dagaalamay ciidanka Dowladda
Maamulka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Degmada Dhuusa Mareeb ayaa sheegay inay cafis yihiin dhalinyarada ka tirsan Ururka Ahlu Sunna, gaar ahaan kuwii ciidanka dowladda kula dagaalamay Magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud.
C/raxmaan Cali Geeda Qoroow, Guddoomiyaha Maamulka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Magaalada Dhuusa Mareeb, ayaa u sheegay Warbaahinta inay cafis yihiin dhalinyarada ka tirsan Ahlu Sunna ee Magaalada Dhuusa Mareeb laga saaray, wuxuuna sheegay inaan waxba loo qabsan doonin dhalintaasi.
Geeda Qoroow wuxuu tilmaamay in dhalinyaradaasi uu u sheegayo in Magaalada Dhuusa Mareeb ay tahay Magaaladooda oo ay si nabad ah ugu soo noqon karaan, iyagoo aan sameynin wax carqalad ah ama falal lidi ku ah dhanka ammaanka.
“Waxaa jiray markii dagaalka uu dhacay dhalinyaro Magaalada laga saaray oo banaanka u baxay, kuwaasina waxaan leenahay cafis baad tihiin cid wax idiin haysato malahan Magaalada waa Magaaladiina si nabad ah ku soo noqda oo imaada”Ayuu yiri C/raxmaan Geeda Qoroow.
Guddoomiyaha Maamulka Dowladda ee Magaalada Dhuusa Mareeb, ayaa dhanka kale wuxuu ugu baaqay shacabka Gobolkaasi kasoo jeeda inay nabadda ka qayb qaataan iyo sidii ciidanka ay ula shaqeyn lahaayeen.
Waxaa socota waan-waan nabadeed oo lagu doonayo in xal rasmi ah looga gaaro dagaaladii ka dhacay Gobolka Galgaduud ee udhaxeeyay dowladda Federaalka Soomaaliya ciidankeeda iyo garab kamid ah ciidamada Ururka Ahlu Sunna.
Xaalada Magaalooyinka Dhuusa Mareeb iyo Guriceel ayaa degan, inkastoo shalay subaxdii shacabka Dhuusa Mareeb ay dareemeen qal-qal amni kadib warqado lagu daabacay calanka Shabaab oo lagu daadiyay Magaaladaasi.